वकिल के हो? | गठन र अध्ययन
एक वकिल एक वकील देखि के छ को फरक फरक व्यक्तिहरु लाई सक्षम छन्। वकिलको संख्या सामान्य व्यक्तिलाई त्यति थोरै मात्र थाहा छ, यद्यपि यसमा एक वकिलको हुन सक्ने समान महत्त्व छ। तपाईंहरू दुवैले सँगै काम गर्नुभयो ताकि विवादमा विवाद सुलभ ढ .्गले अघि बढ्न सकोस्।
अर्को लेखमा हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न जाँदैछौं ताकि अबदेखि तपाईंलाई थाहा छ एक जना वकिल हुनुहुन्छ न्यायिक क्षेत्रभित्र उनीहरूका कार्यहरू के हुन्।
1 वकिल के हो?
2 जब एक वकिलको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ
3 वकिल कसरी एक वकिल भन्दा फरक छ?
4 एक वकिलको कर्तव्य
5 वकिलको कर्तव्य
वकील कानून मा डिग्री छ र अदालत मा एक व्यक्ति वा एक कम्पनी प्रतिनिधित्व गर्ने एक हो। वकिल कानूनको एक शाखा जस्तै प्रक्रियागत कानून मा विशेषज्ञता। वकिल द्वारा गरिएको प्रतिनिधित्व नोटरीबाट प्राप्त पावर अफ अटर्नीलाई धन्यबाद दिईन्छ।
वकिलको उपस्थितिको लागि धन्यवाद, यो ग्यारेन्टी छ कि प्रश्नमा फैसला पार्टीको समानता जस्ता अधिकारमा आधारित हुनेछ। अभियोजकको संख्या यति महत्वपूर्ण र आवश्यक छ कि उही एकको उपस्थिति बिना कुनै निश्चित निर्णय सुरु गर्न सक्दैन।
जब एक वकिलको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ
कुनै पनि नागरिक मुद्दा चलाईमा वकिल एक अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्दछ। यसलाई ध्यानमा राख्दै, वकिलको संख्यामा दायित्वहरूको एक श्रृंखला हुन्छ:
तपाईंले पूर्ण सहयोग गर्नु पर्छ क्षेत्राधिकार निकायहरूको साथ।
रक्षा र विभिन्न ग्राहकहरु को प्रतिनिधित्व यसलाई तपाईंको सेवाहरू आवश्यक छ।
ग्राहकहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् जसको आर्थिक स्थितिले यसलाई अनुमति दिदैन।
सही कागजात ल्याउनुहोस् यो प्रतिनिधित्व मामला को।
एक ग्राहक जो एक वकील को सेवाहरु को आवश्यकता छ, तपाईलाई बिभिन्न तरीकाले वा साधनको रूपमा चाहिन्छ:
वकिलहरूको कलेजमा एक याचिका तयार गर्दै।
सिफारिस मार्फत एक विश्वसनीय वकील बाट।
सम्बन्धित अदालतको आवश्यकता छ कर्तव्य मा एक वकील।
वकिल कसरी एक वकिल भन्दा फरक छ?
फरक एकदम स्पष्ट छ र यो हो कि वकिल आफ्नो ग्राहकलाई बचाउनको लागि जिम्मेवार व्यक्ति हो। वकील को मामला मा, गर्नएक ग्राहक प्रतिनिधि को रूप मा कार्य गर्नुहोस् र ऊ मुद्दा दायर प्रक्रियामा आवश्यक सबै कागजातहरू राख्ने जिम्मामा छ। भने, वकील अदालतमा ग्राहकको संख्या भन्दा बढि केहि छैन। अर्कोतर्फ, यसले वकिलले अदालतलाई एकै समयमा दिने सबै कागजातहरू प्रस्तुत गर्दछ कि यसले वकिललाई आफैंलाई बिभिन्न अदालतको सूचनाहरू दिन्छ।
विपक्ष द्वारा, वकिलको संख्या अदालत मा आफ्नो ग्राहकको बिभिन्न हितको रक्षाको आरोप मा छ। तिनीहरू विभिन्न मुद्दामा सिधा कार्य गर्दछन् र ग्राहकलाई आवश्यक सबै कुराको लागि सल्लाह दिन्छन् ताकि मुकदमाको नतिजा सबैभन्दा बढी लाभदायक हुन सक्दछ।
एक वकिलको कर्तव्य
वकिलको मुख्य कार्य भनेको सबै कागजातहरू व्यवस्थित गर्नु हो जुन कुनै विशेष अभियोगको सन्दर्भमा आवश्यक छ। यो लिंक भन्दा बढि केही होइन जुन अदालत, ग्राहक र वकिलको बीचमा हुनुपर्दछ। यो एक विशेष परीक्षणको उचित पाठ्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सम्मनहरू वा सूचनाहरूको लागि जिम्मेवार हुनेछ।
तपाईले देख्न र अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ, वकीलको फिगर आवश्यक हुन्छ र कुञ्जी हुन्छ जब निश्चित मुद्दा चलाउन सकिन्छ र पूर्ण रूपमा चलाउन सकिन्छ। वकिलले वकिलको फिगरको साथ मिलेर काम गर्दछ कानूनी प्रकृतिको कुनै पनि मामलामा तपाईंको उपस्थिति आवश्यक छ।
वकिलको भूमिका कानूनको शाखामा निर्भर हुन्छ जुनमा उनी विशिष्ट छन्। श्रम वा कर कानून मा विशेषज्ञ एक वकिल वैवाहिक कानून मा विशेषज्ञ जो अर्को जस्तै छैन। वकिलको मामलामा, यो ध्यान दिनुहोस् कि उहाँ केवल प्रक्रियागत कानूनमा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र दुबै व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुनेछ।
संक्षेप मा, वकिल को फिगर वकील को तुलनामा पृष्ठभूमि मा छ। जे होस्, तपाईंले हेरे जस्तो, यो वकील एक कुञ्जी हो जब यो एक निश्चित मुद्दा चलाउन प्रक्रिया शुरू गर्न आउँदछ र सबै नियम अनुसार चल्न सक्छ। दुबै वकिल र वकील एकसाथ कुनै कानुनी मामिलामा काम गर्न आवश्यक छ जुन उनीहरूको उपस्थिति चाहिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » विश्वविद्यालय » वकिल के हो?
Reasons कारणहरू सामाजिक शिक्षामा डिग्री अध्ययन गर्न